दुर्गेश र गरिमाकाे विवाद; मध्यरातमा रुदै लाइभमा आएर यसाे भनिन् गरिमाले (भिडियो हेर्नुस्) – Kavrepati
गुल्मीमा तिब्र गतिमा हुँइकिदै आएको जीप सडकबाट तीन सय मिटर तल बजारियो, तीन जनाको मृत्यु, सात जना घाइते
श्री कृष्ण श्रेष्ठले अन्तिम अन्तर;बार्तामा यस्तो भनेका थिए – (भिडियो हेर्नुस)
आफ्नै मृ’त्युको हल्ला फैलाउदै बिजय शाही काठमान्डौबाट भागेर कालिकोट, घरमा बसेर टिभी हेर्दै
श्रीमान श्रीमती नै शिक्षक थिए, अहिले गाउँलेहरूले नै बनाइदिए भिख माग्ने
पब्जी र फ्रिफायर बन्द : कहिले देखि बन्द हुन्छ त ? हेर्नुहोस
Home / मनोरंजन / दुर्गेश र गरिमाकाे विवाद; मध्यरातमा रुदै लाइभमा आएर यसाे भनिन् गरिमाले (भिडियो हेर्नुस्)
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 45 Views
जज फेरेर प्रसारण हुँदै ‘नेपाल आइडल- ४’ : हेर्नुहोस
दुर्गेश र गरिमाकाे विवाद; मध्यरातमा रुदै लाइभमा आएर यसाे भनिन् गरिमाले (भिडियो हेर्नुस्) । नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा अनेक विवाद र आलोचनाका कुराहरु बेला-बेला भैरहेको नै हुन्छ । सामाजिक संजालले सेलिब्रेटिहरुको यस्ता विवादहरु निम्त्याउने गरेकाे स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तैमा सामाजिक संजालबाट सुरुभएको कुराले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा स्थान पाएपछि यतिबेला टिकटकर तथा मोडल गरिमा शर्मा त-नावमा परेकी छन् । केही दिनअघि टिकटकमा केही क्लिपहरु भाईरल नै भए, जहाँ गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा र टिकटकर तथा मोडल गरिमा शर्मा ब्रे-क-अ-पका कुरामा झ-ग-डा गरिरहेका थिए ।
हेर्दा धेरैलाई सत्य नै लाग्यो र टिकटक प्रयोगकर्ताहरु २ धार भएर एकअर्काको सपोर्टमा कमेन्ट गर्न थाले तर, त्यो सबै एक गेम भएको गरिमाले बताएकी छन् । सेलिब्रेटिको दर्जा पाईसकेका हस्तिहरुले गेमको नाममा यस्ता हर्कत गर्नु जायज भने पक्कै पनि हैन । गरिमाको अनुसार यो सबैबारे रजतपटका प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीलाई फोन मार्फत जानकारी गराएका थिए ।
सम्बन्धित ब्यक्तिको आधिकारिक धारणा आईसकेपछी पनि यस्तो रिपोर्टले चो-ट त अवस्य नै पुग्छ भने रजतपटमा सो लाईभको भाईरल भएको अन्य क्लिपहरुलाई ध्यान नदिई रिपोर्ट बनाईनुले गरिमालाई अझै आ-गो-मा घ्यु थपेको बुझ्न सकिन्छ । हेनुहाेस् बाँकि भिडियाेमा गरिमाले के-के भनेकि छिन् त:-
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २६ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला हुन्छन् माता लक्ष्मीका प्रिय
कल्पना दाहालको प्रेम विवाह !
काठमाडौं / गायीका कल्पना दाहालको पहिलो तीत गीत ‘प्रेम विवाह’ सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो …